Akụkọ - Na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ, teknụzụ microporous na ngwaahịa na ngwaahịa a na-eji n'ọtụtụ ebe
Na ụlọ ọrụ nke oge a, a na-eji teknụzụ microporous na ngwaahịa na ngwaahịa eme ihe n'ọtụtụ ebe
Na ụlọ ọrụ nke oge a, a na-eji teknụzụ microporous na ngwaahịa na ngwaahịa eme ihe n'ọtụtụ ebe. N'ime ha, ngwaahịa akwa (akwa na akwa ụlọ) na ngwaahịa nchekwa ọgwụ na-eweta nnukwu ọnụọgụ. Site na akụrụngwa (kemịkal kemịkalụ) na ngwaahịa emechara, akụrụngwa gafere ọtụtụ usoro, dị ka ịtụ ogho, ịkpa akwa, ịcha akwa, ịkwa akwa, wdg, usoro kachasị mkpa bụ otu esi ebufe akụrụngwa site na ahụ. na eriri kemịkal, yabụ teknụzụ spinneret dị.
A na-akpọkwa spinneret spinnerette. ọ bụ a ụdị ihe nwere ọtụtụ obere oghere na thimble ka metal nozulu eji maka chemical eriri spinning. A na-agbaze ihe a na-agbaze ma ọ bụ na-agbaze na kemịkal, mgbe ahụ, a na-apịa ya site na oghere ndị ahụ iji mepụta filament, nke a na-eme ka ha sie ike site na odide, evaporation ma ọ bụ jụrụ. Spinnerets na-ejikarị igwe anaghị agba nchara, mana imepụta rayon chọrọ platinum. Nha na ọdịdị nke oghere spinneret na-ekpebi ụdị akụkụ obe nke filament ahụ. Oghere ọ bụla na-eme otu eriri, eriri ndị a jikọtara na-eme ka ha nwee otu yar yar.
Site na mmepe nke covid-19 na ụwa, yana ntiwapụ na United States na Europe, ngwaahịa nchekwa na teknụzụ bụ isi nke akwa na-enweghị akwa (akwa na-agba agba / agbaze agbaji agbaji) enwetawo uche ụwa ọzọ. Site na nsogbu na mmalite nke ọrịa ahụ na ihe ọhụụ ọhụrụ chọrọ, ụlọ ọrụ anyị amalitelagbazee gbawara spinnerets & spun bonded spinneret & spinneret anwụ nkụnye eji isi mee & na-abụghị kpara akwa mmepụta akara izute ahịa ahịa, ma nweta ezigbo nzaghachi si ahịa.
Tụkwasị na nke a, ụlọ ọrụ anyị nwekwara nnukwu ahịa nke spinnerets a na-eji na akwa akwa akwa, dịka iche iche spinnerets mejupụtara (-dị agwaetiti-mmiri / sisi-heath-isi pịnye / nke-pie pịnye), ma ziga ya na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
Pp Agbaze Fụọnụ Iyo, Non-kpara Fabric Ihe, Non-kpara akwa, Pp Non kpara Fabric Production Line, Production Usoro Of Non-kpara Fabric, Pp Disc Myọcha, Ngwa niile